असल पुरुष | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 01/10/2010 - 12:57
सत्या वरदानसँग निकै नै आकषिर्त भइसकेकी थिइन् । वरदानकोप ढाइ र सादापनले सत्याको मन खिचेको थियो । जसको कारणल मित्रता पनि झाँगिदै थियो । लाइबे्ररीमा बसेर घण्टौँसम्म यिनीहरू अध्ययन गर्थे । एकदिन सुत्याले वरदानलाई भनिन् ।
सत्याः म एउटा कुरा भन्छु तपाईं मान्नुहुन्छ ?
वरदानः भनन के कुरा हो ?
सत्या मुस्कुराइन् । वरदान पनि मुस्कुरायो । 'म तिमीलाई माया गर्छु' - भनेर सोझै भन्न उनीलाई अप्ठ्यारो लाग्यो । उनले कुरा अन्तै मोड्दै भनिन् ।
सत्या ः कति पढ्ने मात्र । कहिले कहि त मनोरञ्जन गर्नुपर्छ नि । बिदाको दिन हामी कतै डुल्न जाउन हुन्न ।
वरदान ः भैहाल्छ नि । एकदिन ती दुई पार्कमा गए । केटाकेटीका जोडी पार्कभरि देखिन्थे । त्यहाँ रहेका जोडीहरू आफ्नै मस्तिमा एक अर्कालाई माया गर्दै अँगालोमा बाँधिएका थिए । सत्या र वरदान चाहिँ आफ्नै धुनमा कुरा गर्दै पार्कभित्र भित्र गए ।
पार्क धेरै ठूलो थियो । एकान्त स्थान खोज्ने प्रेमी प्रेमिकालाई त्यस्तो ठाउँ पनि थियो, जहाँ बंैसले उन्मत्त जोडी एक आपसमा हराउँथें । ठाउँठाउँमा ससाना पोखरी बनाइएको थियो । त्यहाँ पहाडबाट झरेका खोल्चाहरू बगेका थिए ।
डाँडाको तरेली, उकाली ओराली, वातावरण असाध्यै रमाइलो थियो । प्राकृतिक छटाको वर्णन गरेर साध्य नै थिएन । ठाउँ ठाउँमा घामपानीबाट बच्नका लागि स-साना छाप्राको निर्माण गरिएको पनि देखिन्थ्यो । वरदान र सत्या आफ्नै शुरमा प्रकृतिलाई नियाल्दै हिँडिरहेका थिए । ठीक त्यही बखत सत्याको आँखा एक्कासी एउटा जोडीमा पर्‍यो । केटाको काखमा प्रेमिका पल्टिएकी थिइन् । यो दृश्यले सत्यालाई रमाइलो बनायो ।
केहीबेरको उकालो चढेपछि सत्यालाई थकाई लाग्यो । सत्यालाई प्यास लाग्न थाल्यो । उकालो चढ्ने बानी नभएकाले उनीलाई स्याँस्याँ पनि आउन थाल्यो । वरदानले त यस्ता उकाली आह्राली आफ्नो गाउँमा प्रशस्त गरेको थियो । उनी त शहरकी परिन् । सत्याले आफ्नो ब्यागबाट मिनरल वाटरको बोटल निकालिन् र पानी पिइन् । वरदान त्यो देखेर मुस्कुरायो । उसले मनमनै सम्झियो । यस्ता उकाली त हाम्रा गाउँले दिदीबहिनीको लागि कही न केही ।
उनीहरू एकदम एकान्त ठाउँमा पुगे । सत्यालाई त्यही बस्न मन लाग्यो । तिनीहरू नजिकैको पोखरीको डिलमा बस्न गए । पोखरीमा विभिन्न रङ्गका माछा देखिन्थे । माछा खेलेको मनोहर दृश्यले वरदानको ध्यान खिच्यो । सत्यालाई एकदमै वरदानसँग बोल्न मन लागिरहको थियो । वरदान भने माछा हेरेर एकोहोरियो । सत्यालाई त्यहाँ बसिरहन मन लागेन । उनलाई माछा हेर्ने सोख थिएन । यस्ता माछाहरू त आफ्नै कोठाको एक्वारियममा हेरेर सतयाको समय बित्ने गथ्र्यो । उनीलाई त वरदानसँग हाँसखेल गर्दै गफ गर्नु पो थियो । त्यसैले सत्याले अर्कैतिर जाउँ भनिन् । वरदान पनि बाँधिएको बोका जसरी सत्याको पछि लाग्यो ।
अलि टाढा पुगेपछि ठूलो रुख आयो । त्यो रुखको वरिपरि शितल छाहारी बनेको थियो । सिरिसिरी बतास चलिरहेको थियो । यी दुवै त्यही छाहारी मुनि बस्न गए । वरदान आफ्नै कल्पनामा थियो । सत्या चाहिँ वरदानको समीपबाट आनन्द लिन खोज्दै थिइन् । त्यसै बखत एक जोडी प्रेमी एक अर्कालाई अँगालो मार्दै उनीहरू बसेको ठाउँबाट अघि बढे । रोमान्टिक मुडमा रहेकी सत्यालाई भने त्यति रमाइलोलागिरहेको थिएन । वरदान भने निरस थियो । ऊ त्यो एकान्तमा पनि सत्यालाई स्पर्श गर्न खोज्दैनथ्यो । जिस्क्याउन खोज्दैनथ्यो ।
वरदानको भोलेपन देखेर सत्या मुस्कुराइन् । यो त ऋषिमुनिभन्दा पनि कडा पो रहेछ । यसलाई त मेनका, उर्वसी जस्ता अप्सराले पनि भुलाउन नसक्ने झैँ उनीलाई लाग्यो । त्यसैले उनको हातको हत्केला आफ्नो काखमा राखेर ठट्टैमा सत्याले भनिन् - 'वरदान तपाईंको हातको रेखाले त तपाईं योगी जस्तो हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ नि ।' वरदान हाँस्यो मात्र । एउटा तरुनीले एकान्त ठाउँमा उसको हात समात्दा पनि उसमा केही पनि परिवर्तन आएन । सत्यालाई भने त्यो स्पर्शले निकै रोमान्चित बनायो ।
रात परिसकेको थियो । सत्या घर फकिसकेकी थिइन् । ओछ्यानमा पल्टिएर वरदानसँग दिउँसो बिताएका क्षणहरू सम्झदै उनी बसिन् । वदानलाई के भएको होला, उसले मलाई एकचोटि मात्र पनि अँगालो हालेन । उसले मलाई मन पराउँदैन त । त म मा के कमि छ र ! राम्री छु, पढेकी छु । के भएको होला, उसलाई त्यस्ता रोमान्टिक दृश्यहरूले पनि किन छुन नसकेको ? उसले मेरो हातसम्म पनि समाएन । बरु मैले नै उसको हात समाएँ ।
सत्या सोच मग्न भइन् । म जे गरिरहेको छु के त्यो ठिक त गरिरहेकी छु ? त्यस्तो एकान्त ठाउँमा वरदानले मलाई जे पनि गर्न सक्थ्यो । वरदानको सौम्यपनले अझ सत्याको मन खिच्यो । उनी पार्कको कुरा सम्झिएर बसिरहेकी थिइन, त्यही बखत सत्याको मोबाइल बज्यो । उनको ध्यान भङ्ग भयो ।
सत्या ः हेलो । तपाईं कहाँ ? वरदान ः म डेरामा । सत्या ः दिउँसो सन्चो थिएन कि क्या हो ? त्यति बोल्नु पनि भएन ।
वरदान ः म त सन्चै छु । तर मन ठेगानमा थिएन । सत्या ः के भयो ? किन ठेगानमा भएन ?
वरदान ः सत्या म धेरै दिनदेखि तिमीलाई यो कुरा भन्न चाहन्थ्यें । तिमीले मप्रति अति प्रेमभाव देखायौं । त्यसैले कुरा गर्न सकिन । अब मैले भन्नै पछ । म मेरो जिन्दगीको यथार्थ भन्न लागिरहेको छु । तिमी यो कुराले कति दिक्क नहोऊ है ?
सत्या ः हुन्छ भन्नुहोस् ।
वरदान ः तिम्रो मायाको बदला माया दिन म असमर्थ छु । किनकि म विवाहति हुँ । सत्या छाँगाबाट खसे जस्ती भइन् । उनले केही भन्नै सकिनन् । उनको मोबाइल हातबाट ओछ्यानमा खस्यो । उनले मानिस चिनन् । वरदानलाई अत्यन्त असल मानिस ठानिन् । वास्तवमा भन्ने हो भने सत्याले यस्तो भद्र मानिस आजसम्म देखेकी थिइनन् । वरदानलाई आफूले विश्वास गरेर कुनै फूल नगरेको रहेछु भन्ने उनको मनमा लाग्यो । वरदानले यो कुरा भनेर ठिक गरेको उनले सम्झिइन् । आफूले असल भएकोले असल मान्छे चिन्न सत्याले सकेकी थिइन् तर उनको मन मस्तिष्कमा भने ठूलो आँधी चल्न थाल्यो । अब आजको दिनदेखि उनले वरदान असल पुरुष नै भए पनि ऊसँग टाढा रहनु पर्ने विचार मनमा राखिन् ।
Very good sachikai sabai
अतिथि — Wed, 02/03/2010 - 19:20
Very good sachikai sabai purus haru ko man yastai safa bhidini bhaya sayad kunai nari ani purus runa parni tiyana hola
Yak dam man paryo Dhanyabad Lekhak ji